सबै भन्दा उत्तम पुरूषमा हुन्छन् यस्ता गुण - ज्ञानविज्ञान
महिला सम्बन्धी जानकारीः
शास्त्रका अनुसार यी १२ लक्षण भएका युवती हुन्छन् सबैभन्दा भाग्यमानी ।
ज्योजिश शास्त्र, सुमुन्द्र शास्त्र अनुसार मानिसको शरिर अंगको बनाबट तथा रूप रेखा हेरेर कुनै पनि मानिसमा भएको उसको गुण, स्वभाव, भाग्य र जिवन जस्ता धेरै कुराहरू भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ ।
शिव पुराणमा कुमार कार्तिकेयले यस्ता गुणहरू पनी बताएका छन् जुन मानिसमा त्यसता गुणहरू हुन्छन् ति मानिसहरू सौभाग्यशाली, भाग्यमानी र शुभ फल प्राप्त गर्छन् । उक्त शिव पुराणमा भाग्यमानी हुने कन्याको नाम उल्लेख गरिएको छ । यि यस्ता १२ गुण भएका युवती संग विवाह गर्ने पुरूष राजा सम्मान बन्न सक्ने उक्त पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । हेरौ उक्त सौभाग्यशाली हुने १२ लक्ष्णहरू
यस्ता आँखा हुने सँग बच्नुस्
२. कालो कपाल भएका र आगाडीपट्टी झुकेको कपाल हुने युवती भाग्यमानी हुने समुन्द्र शास्त्रको भनाइ छ । चिल्लो, कोमल र मुलायम कपाल भएका कन्यालाई उत्तम मानिएको छ ।
५. सिन्दुर लगाउने स्थान सिधा र उठेको छ भने त्यस्ता युवती सँधै भाग्यवती मानिन्छन् ।
६. आँखी भौ जोडिएका युवतीलाई विश्वास गर्न नसकिने समुन्द्र शास्त्रको भनाइ छ । आँखीभौं धनुष जस्तै झुकेको भए यस्ता युवतीलाई भाग्यमानी मानिन्छ ।
पुराण भन्छः यी ४ प्रकारका युवतीसँग विवाह गर्नु हुँदैन
७. आँखाको कुनामा लालिमा हुनु र नानी गहिरो कालो हुने तथा अन्य भाग सेतो आँखा भएका कन्या लक्षणले भरीपूर्ण मानिन्छन् ।
८. हातमा हाड जोडिएको स्थान नदेखिने युवती भाग्यमानी हुने मानिन्छन् ।
९. लामो र कोमज तथा रौं रहित हात भएका कन्यालाई उच्च श्रेणीमा राखिएको छ । छोटों हात भएका कन्या दुर्वल मानिन्छन् ।
१०. चिल्ला, गोला र उठेका नङ हुने कन्या लक्षण भएका मानिन्छन् ।
११. समुन्द्र शास्त्र अनुसार खुट्टाका पैताला राता हुने कोमल र चिल्ला हुने कन्यालाई शुभ लक्षणयुक्त मानिन्छ ।
१२. समुन्द्र शास्त्र भन्छ सामान्य भन्दा बढी लामा औंला हुने युवतीलाई विश्वास गर्दा विचार पुर्‍याउनु पर्छ । गृहस्ती जीवन बसाउँदा यस्ता युवतीसँग बसाउनु राम्रो मानिँदैन ।
यस्तो गुण हुने श्रीमतीले श्रीमानलाई चम्काउँछन् र धेरै भाग्यमानी हुन्छन् जान्नुहोस् !
समुन्द्र शास्त्र अनुसार सारीरिक बनावट , अंग रुप रेखा , ब्याक्ति को जीवन भुत , बर्तमान र भविस्यको बारेमा मानिसको भाविस्यबाडी गर्न सकिन्छ ! शिव पुराण अनुसार कुमार कार्तिकेयले कस्तो गुण भएका महिलाहरु भाग्यसाली , र पुरुषलाई चम्काउने युवती हुन्छन त भनेर भनिएको छ ! उक्त पुराण मा भाग्यमानि हुने कन्या को बारेमा उल्लेख गरिएको छ ! यी छ गुण युवतीमा छ भने आफ्नो श्रीमानलाई राजा सम्मान गराएर राख्ने पनि भनिएको छ !
यी ६ गुण हरु भएका युवतीहरुले चम्काउछन् श्रीमानको भाग्य हेर्नुहोस !
आमासँग अनुहार मिल्ने युवक पनि भाग्यमानी मानिन्छन् ।
–कालो कपाल भएका र आगाडीपट्टी झुकेको कपाल हुने युवती भाग्यमानी हुने समुन्द्र शास्त्रको भनाइ छ ।
–चिल्लो, कोमल र मुलायम कपाल भएका कन्यालाई उत्तम मानिएको छ । गोलो र चिल्लो तथा आकर्षक अनुहार भएका युवती पनि भाग्यमानी हुन्छन् ।
–जुन युवतीको शिरको अगाडीको भाग उठेको छ त्यस्ता युवती धनी र वैभवशाली हुने मानिन्छ ।
–सिन्दुर लगाउने स्थान सिधा र उठेको छ भने त्यस्ता युवती सँधै भाग्यवती मानिन्छन् ।
–आँखी भौ जोडिएका युवतीलाई विश्वास गर्न नसकिने समुन्द्र शास्त्रको भनाइ छ। आँखीभौं धनुष जस्तै झुकेको भए यस्ता युवतीलाई भाग्यमानी मानिन्छ । एजेन्सी
यो पनि पढ्नुहोस ! यि ३ राशी हुने छोरी बुहारी हुन्छन् लक्ष्मी समान, घरलाई बनाउँछन् स्वर्ग
रपारिवारिक मेलमिलाप र वैवाहिक जीवन सुखमय भएमा मात्र जीवन सुखद रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
आफ्नो जिवनमा आउने जीवन साथी उत्कृष्ट परोस् भन्ने हरेक पुरुषको चाहाना हुन्छ । उस्तै परिवारले पनि बत्तिसै लक्ष्निले युक्त बुहारीको आस राखेका हुन्छन् ।
वृष राशीः वृष राशि हुने युवतीहरु धेरैनै समझदार हुन्छन्। आफ्नो मात्र खुशी मात्र नभई पूरै परिवारको खुशीलाई यस राशि हुनेहरु प्राथमिकतामा राख्छन्। अभावमा पनि चित्त बुजाउन सक्ने हुँदा परिवार माथि आइलाग्ने हरेक दुखमा वृष राशि हुने बुहारीहरुले साथ दिन्छन्।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका पुरुहरूले आफ्नो श्रीमती, प्रेमिका को हरेक दुख सुख, खुसीमा साथ दिने र रमाउने हुन्छन् ।
उनीहरू श्रीमती, प्रेमिकाको प्रेममा पागल समेत बन्न सक्छन् । यस्ता राशि भएका पुरुषले जीवनमा आफ्रनो श्रीमतीको हरेक इच्छा,चाहाना पुरा गर्न सफल भएका हसन्छन् । आफ्नो श्रीमती लाइ धेरै माया गर्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रले पुष्टि गरेको छ ।ती राशि कुन कुन हुन् त हेर्नुहोस् ।
Don't Miss it भाग्यमानी मानीसकाे हातमा मात्र हुन्छ यस्ताे रेखा
Up Next फलभन्दा बढी फाइदाजनक छ अम्बाकाे पात, जान्नुहाेस्